Yunivhesiti yeWest Indies Fund (UWI) sarudzo ndiyo nzira yekubhadhara mari yeUWI yechina yakatorwa kambasi.
Vanyoreri kuChizvarwa cheVashandi veMari Vanosarudza iyi sarudzo vachadikanwa kuita mari yekuUS $ 150,000 ye mhuri yevatanhatu (6) kana kudarika (kureva.)
Kutora chikamu musarudzo kuchapa mumwe nhengo yemhuri kwegore rimwe, chidzidzo chete, kudzidza paYunivhesiti yeWest Indies.
Maitiro ekunyorera akanyatsojeka uye mafomu ekunyorera anogona kuwanikwa kune Mumiriri weLayisensi yeMunharaunda, uyo akapihwa rezinesi neCitizensity neInvestment Unit (CIU).
Paunotumira chikumbiro chako unenge wakumbirwa kubhadhara zvizere basa rakakodzera. Kubhadhara gumi muzana kwemari yekugadzirisa kunoitwa kumhuri dzevanomwe (10) vevanhu kana vanopfuura. Kana wagamuchira tsamba yekubvumidza, iwe uchakumbirwa kubhadhara iyo huwandu hwemari yekugadziriswa kwehurumende, mari yepasipoti uye mupiro wako. Mari inobhadharwa yakanangana neiyo Chikamu uye mupiro wako unofanirwa kuendeswa kuHurumende Special Fund mukati memazuva makumi matatu.
Kana zvangogashirwa, gwaro rekunyoreswa kweCitizeniti richapihwa wekutanga wekunyorera uye nhengo dzemhuri yavo rinozoendeswa kuPasipoti Office kuti rinyatsogadzirisa chikumbiro chavo chepasipoti uye chero zvinyorwa zvinoendepi. Kana wapedza, mumiririri wako akamiririra / mumiriri anozotungamira Passports yako uye Citizenship Sitendi gwaro kwauri.
Kupa rubatsiro kuUniversity yeWest Indies (UWI) Fund
A. Kumhuri ye6: -
US $ 150,000 mupiro (kusanganisira mari yekugadzirisa)
Kugadzirisa Mutero: US $ 15,000 yemumwe nemumwe anotsamira anotsamira